I-RGB ye-LED abavelisi kunye nabaxhasi | Umzi mveliso we-China RGB LED
Iziphumo ezikhanyayo eziphezulu ezine kuthotho lwe-5054 RGB
Inkcazo yeMveliso I-RGBW5054package inesiphumo sokuphakama kwamandla, ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu, i-engile yokubukela ebanzi kunye nefomathi yefomathi. Ezi mpawu zenza ipakethe ye-LED efanelekileyo kuluhlu olubanzi lwezicelo zokukhanyisa. I-White Mid Power LED iyafumaneka kuluhlu lobushushu bombala ukusuka kwi2700K-650OK. Ubungakanani: 5.0 × 5.4 mm Amandla: 0.25W / 2.0W Iimpawu eziphambili I-RGB.W inokulawulwa ngokuzimeleyo ● Ukukhanya okuphezulu, ukukhanya okuxubileyo okuhle, ukuzinza okuphezulu ● Ubunzima ...
Isiphumo sokuqaqamba okuphezulu kwe-2835 RGB umbala omnye wombala
Ingcaciso yeMveliso Lo mthombo wokuKhanya kwe-LED wama-2835 sisixhobo esisebenza ngamandla esisebenza ngombane esinokuphatha ukuqhuba okuphezulu okufudumeleyo kunye nokuqhuba okuphezulu ngoku. Isishwankathelo sephakheji encinci kunye nokuqina okuphezulu kuyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokukhanya kwepaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kwetyhubhu ye-LED, ukukhanyisa ngasemva njl. Iimpawu ● Iyafumaneka ngombala opholileyo, mhlophe ongathath'icala kunye nombala omhlophe ofudumeleyo ● I-chromatici ehambelana ne-ANSI ...
Iziphumo eziqaqambileyo eziphakamileyo kathathu kwi-5054 RGB Series
Inkcazo yemveliso Iphakheji ye-RGB 5054 inesiphumo sokusebenza okunamandla okuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, i-angle ebanzi yokujonga kunye nefomathi yefomathi. Ezi mpawu zenza le phakeji ibe yi-LED efanelekileyo kuluhlu olubanzi lwezicelo zokukhanyisa. Ubungakanani: 2.8 × 3.5mm / 5.0 × 5.0 mm Amandla: 0.2W / 0.5W Iimpawu eziphambili ● Ukukhanya okuphezulu kunye nokusebenza okuphezulu ● Iyahambelana nenkqubo yokufaka i-soldering ● Ukumelana nokushisa okuphantsi encapsul ...